Sirta guurka - Miniseries -ka HBO ee kugu xiraya | Bezzia
Susana godoy | 14/09/2021 14:00 | Wararka
Waxaa jira taxane badan oo ka soo muuqda meereyaasha. Bandhigyadu ma joojiyaan inay dhacaan iyo in ka sii badan hadda, iyadoo dib loogu noqonayo caadadii xilliga xagaaga ka dib. Sababtaas awgeed, maanta waa HBO oo haysa booskeenna oo aan keligeed iman laakiin ay la socdaan lamaane isqaba oo wax badan noo sheegi kara. Sirta guurka waa taxanaha cusub taasi way xaaqi doontaa.
Hagaag, waa inaad caddeysaa waxa cusub maxaa yeelay runtii wuxuu ku yaal madal laakiin fikradda asalka ahi waxay ka timaadaa 70 -meeyadii, markaa waxaan wajahaynaa dib u habeyn. Soo hel wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato mid ka mid ah taxanaha ugu badan ee la filayo qorshaheeda, waxbaristeeda laakiin sidoo kale halyeeyaasheeda.
1 Sirta guurka, dib -u -habeynta taxanaha laga soo bilaabo 70 -meeyadii
2 Waa maxay taxanaha mini-ga ee HBO
3 Dhibaatada Jessica Chastain iyo Oscar Isaac
4 Imisa qaybood ayay leeyihiin Sirta guurka
Sirta guurka, dib -u -habeynta taxanaha laga soo bilaabo 70 -meeyadii
Waxay u muuqataa in dib -u -habaynta ay had iyo jeer tahay mid ka mid ah beddellada waaweyn. Sababtoo ah haddii fikrad lagu guuleysto, maxaad ugu sii wadin inaad sharad ku gasho hadhow. Hagaag, tani waa waxa ku dhacaya taxanaha-yar ee HBO soo bandhigto. Taxanaha asalka ah waxaa qoray Ingmar Bergman. Yaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah agaasimayaasha ugu wanaagsan taariikhda shineemada. Xaaladdan, ayaa yidhi Sheekada asalka ah waxaa la toogtay 1973 waxaana jilay Liv Ullmann iyo Erland Josephson kuwaas oo ku guulaystay inay qabsadaan dadweynaha sidaas darteedna ay leeyihiin guulo waaweyn iyo abaalmarino tiro badan. Hadda isla goobtii ayaa soo noqotay, oo leh hawo cusub laakiin diyaar u ah inay ku guulaysato sidii hore.
Waa maxay taxanaha mini-ga ee HBO
Sida aad ka arki karto wixii la yiri. Taxanaha yar-yar wuxuu ku saabsan yahay lamaane isqaba oo ka kooban Jessica Chastain oo ah fuliye aad u guulaystay oo isku kalsoon. Halka dhinaca kale uu jiro lammaanihiisa, Oscar Isaac oo ah borofisar falsafadda oo doonaya kharash kasta in guurkoodu sii socdo. Laakiin waa run in xitaa haddii aan aragno dood tan fudud, ma noqon doonto mid sidaa u fudud. Sababtoo ah waa mid ka mid ah shaqooyinkaas wuxuu ina tusayaa, iyada oo ay u soo jeedaan jilayaasha, jacayl iyo gaalnimo iyo furriin labadaba, iyo mowduucyo kale oo badan oo qalbigaaga gaari doona.
Dhibaatada Jessica Chastain iyo Oscar Isaac
Maalmahan waxaa aad loo hadal hayey iskaashiga labada dhinac. Marka la eego lagu dhajiyay rooga cas ee Venice wayna faafeen. Sababtoo ah intii Jessica ay eegeysay laydhka, Oscar ayaa eegayay iyada. Muuqaal adduunka oo dhan ku soo qulqulay oo shabakadda ku fatahay faallooyinkii ugu fiicnaa. Dhammaantood waxay ku dhammaadeen hab -dhunkasho, dhunkashada gacanta iyo isku -dheelitirka oo la gaarsiiyey heerka ugu sarreeya. Laakiin si aysan faraha uga bixin, waxay ku degdegeen inay ka faalloodaan in jilayaashu ay is yaqaaneen noloshooda oo dhan, iyagoo kulliyad wada galay. Sidoo kale ma ahayn shaqadoodii ugu horreysay ee ay wada qabtaan, sidaa darteed waxay doorbideysaa xitaa ka sii adag oo laga yaabo inay jirto.
Imisa qaybood ayay leeyihiin Sirta guurka
Ku soo noqoshada taxanaha laftiisa, waa in la sheegaa inaad qaadan karto marathon -ka iyo orodka. Sababtae taxanahani wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood oo kaliya. Markaa waxay umuuqataa inay yeelan doonto hal xilli. Mararka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo aad u gaagaaban laakiin waxay ka fiican yihiin tan kooban oo aan ka dheerayn sheeko aan ugu dambayn ku daali karno. Waxa kale oo uu ka hadlaa arrinta lammaanaha dhinac kale, maroojin mar walba la yaab leh. Waxay u muuqataa inay haysato shaki kasta oo suurtogal ah halka ninkeedu doonayo inuu sii ilaaliyo midowga qoyska. Dabcan, si aad u ogaato, waa inaad aragtaa maxaa yeelay mar hore ayaa laga heli karaa HBO
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Sirta Guurka: Taxanaha HBO Waa inaad Aragtaa